Maamule: Ms Tracy Dohel
Weydiimaha iyo codsiyada booqashooyinka waa in wax looga qabtaa
Telefoon: 0208 672 8582
Fakis: 020 8767 5502
Fadlan sidoo kale la xiriir kulliyadda haddii aad jeceshahay inaad codsato nuqulo warqad ah wixii macluumaad ah ee lagu daabaco websaydhka kuleejka.
Maamule kuxigeenka: Ms N. Patel
Waxaa lagula xiriiri karaa kuleejka 0208 672 8582. Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan bixinta agab ku dhagan guji kuleejka guji halkan
SIDII AAN UGU HESHO
The college is located in Wandsworth, Koonfurta London gudaheeda masaafad socod socod lug ah oo dhulka hoostiisa ah Tooting Bec oo ku taal khadka Waqooyi iyo u dhaw dhowr wado oo bas ah.
Wadooyinka 155, 219, 249, 319, 355, 690 kulligoodna way ku ag dhow yihiin kulliyadda.
Macluumaad dheeri ah riix iskuxirka websaydhka TFL ee hoosta (Waxaad u baahan doontaa inaad gasho lambar-koodh-koodhka SW17 7DF)
Waxaan socod gaaban u jirnaa saldhigga tuubbada Tooting Bec.
Tilmaamaha Socodka ee Tooting Bec:
Kaga bax xarunta saldhiga u ah wadada Trinity, Midig u leexo oo kor u soco Jidka Trinity, iskutallaab ku tallaabo lugeeyayaasha ee wadada dhinaceeda hore ee loo yaqaan 'Trinity Road' M&Garaashka. Bidix bidix u gal Glenburnie Road oo ay mareyso wargeysyada & kafeega, ka dibna marka hore midig u gal Langroyd Road. Raac waddadan wareega ku wareegsan bidix (waxay noqotaa Wadada Brenda).
Dhamaadka Brenda Road waxaad wajaheysaa kuliyadda Ernest Bevin. U isticmaal isgoysyada lugeeya luguna leexo midig dhanka bidix ama bidix si aad u gasho xarunta isboortiga adigoo u sii maraya baarkinka gaariga (fiidkii & qaban qaabada kaliya).